China Animal nchedo nsu hexagonal waya ntupu factory na suppliers |XINTELI
Nchekwa anụmanụ nsu ntupu hexagonal waya
Aperture: 13mm, 25mm, 16mm, 20mm, 30mm wdg
Waya dayameta: 0.6mm ~ 2.0mm
Ogologo: 5m, 10m, 25m, 30m ma ọ bụ dị ka gị chọrọ
Obosara: 50cm, 100cm ma ọ bụ dị ka gị chọrọ.
Ụdị ịkpa ákwà: ntụgharị kwụ ọtọ, ntụgharị ntụgharị
Ngwa:Ngwongwo anụ ọkụkọ, hoop ọkụkọ, ụgbụ oke bekee, ụgbụ a na-achọ mma, nchebe ọdịdị ala.
Uru ngwaahịa: Iji adaba, ogologo ndụ ọrụ, ike nchebe dị elu, ọ dị mfe ịkpụ, ezigbo mgbanwe.
Waya ọkụkọ ma ọ bụ ụgbụ anụ ọkụkọ, bụ ngere dị iche iche, ejiri ya ma dị n'ụwa niile.Ọ na-abịa n'ụdị dị iche iche site na obere waya siri ike ruo na nnukwu oghere na-agbanwe agbanwe.A na-eji ya maka ịnwe ma anụmanụ na mpaghara ma ọ bụ idobe anụmanụ site na mpaghara.
Galvanized waya ntupu na-aha galvanized hexagonal waya ntupu. Nọmalị, na waya dayameta bụ 0.6mm ka 2.0mm.The waya dayameta mita bụ dabere size nke hexagonal ntupu oghere.Hexagonal waya netting na-emepụta na elu àgwà nke ala carbon ígwè waya. Ọ bụrụ na ị chọrọ waya ntupu na-eji ruo ogologo oge. Ọ dị mma na-ahọrọ galvanized ma ọ bụ plastic ntekwasa. The ntupu siri ike na Ọdịdị ans nwere flat surface. Hexagonal waya ntupu mpịakọta nwere ike ịbụ ma obere na nnukwu.
Anyị nwere ike ịhụ galvanized hexagonal waya ntupu nke ukwuu mgbe na anyị kwa ụbọchị ndụ. Dị ka, hexagonal waya ntupu netting eji maka ịzụ ọkụkọ (ya mere anyị nwekwara ike na-akpọ ya ọkụkọ waya ntupu), Animal nsu, mechanical equitment protection.Galvanized waya ntupu nwekwara ike ịbụ. gabion,eji echebe ma na-akwado seawalls, ugwu, àkwà mmiri.Galvanized ọkụkọ waya ntupu dị ezigbo mma dị ka idei mmiri na-achịkwa na idei mmiri ọgụ.
Ozi bụ isi:
1. Hot tinye galvanized (HDG) mgbe akwa akwa
2. Hot tinye galvanized (HDG) tupu akwa akwa
3.Electric galvanized mgbe akwa
4.Electric galvanized tupu akpa akwa
Mesh oghere: 1/2 '', 1'',3/8'',3/4'',2''
Uru ngwaahịa: Iji adaba, ogologo ndụ ọrụ, ike nchebe dị elu, chekwaa ụgwọ njem, ezigbo mgbanwe.
Anyị na-elekwasị anya n'ọhịa a ruo ọtụtụ afọ. A na-enye ihe nlele na obere iwu ikpe nwere ike ịnakwere. Ọnụ ahịa anyị nwere ezi uche ma nọgide na-adị mma maka ndị ahịa ọ bụla.
Nke gara aga: Ọnụ ahịa kacha ala China 2′′ X 2′′ Hot Dipped Galvanized Weld Mesh Panel A na-eji ngere ogige.
Osote: Ekebere Pụrụ Iche maka China N'ogbe Galvanized Chain Link Fence/VC mkpuchi ejiri yinye njikọ ngere maka ọrịre
1 inch ntupu ọkụkọ waya
Ngwakọta waya ọkụkọ hexagonal
Igwe ọkụkọ waya ntupu ngere
Galvanized hexagonal waya ntupu Animal Fence